Ọ dị njọ ịme otu mgbatị ahụ kwa izu? - Mmega
Isi > Mmega > Ugboro ole ka ị kwesịrị ịgbanwe mgbatị gị - akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
Ọ dị njọ ịme otu mgbatị ahụ kwa izu?
Ọkpụkpụ akwara nwere ike iduga mmerụ ahụ
'Dabere na ụdịrụpụta,na-eme otu ihe ahụna-eme kwa ụbọchị nwere ike na-emebi ahụ gị ma nwee ike iduga nha nha ma ọ bụrụ na ị na-adị mgbe niileọzụzụiheotuotu akwara ma ọ bụ naanị na-agagharị n'otu ụgbọ elu, 'Tucker na-ekwu.Ọnwa Itolu 14, 2020
JESSIE: Hey, Jeff! JEFF: Yo?! JESSIE: Uh, Achọrọ m ịhapụ gị ihe ngwa ngwa. JEFF: N’ezie. JESSIE: yoù maara otú i sibu ekwu, sị, 'debe ihe ọhụrụ ma na-atọ gị ụtọ'? I nwere ike ime ya na intros YouTube.
Echere m na 'kedu ihe bụ ụmụ okorobịa? Jeff Cavaliere 'enwetala ntakịrị iwe. JEFF: Odi mma. Odi ihe i nwere JESSIE: Odi, nke mbu.
JEFF: Dude. Naanị ị na-ele anya. JESSIE: Ee.
Ha hụrụ nke ahụ n'anya. Ihe m na-ekwu bụ na m na-eme ya. Really nwere mmasị na nke ahụ.
Ọ dị mma olee maka nke ahụ? 'Jeff Cavaliere, ATHLEANX.com'? JEFF: Ichoro ka m mee jazz aka? Jessie: Ọbụna nke ka mma, 'Gịnị bụ ụmụ okorobịa? Jumpin 'Jazzy Jeff, ATHLEANX.com'.
Chere. Grew tolitere n’ime afọ 90 ka ọ bụrụ mmasị n’egwú nke 90s. Enwetara m ya.
Na-amasị Creed. 'Gini na -a, onye obula?! Jeff Cavaliere -a, ATHLEANX.com -a'M ga na-eche maka ha.Enwere m ọtụtụ ndị dị mma ebe a, enyi.JEFF: Kedu ihe bụ ụmụ okorobịa! Jumpin 'Jazzy Jeff - ah, mba.
Ọ naghị arụ ọrụ Jessie. Anaghị m agbanwe agbanwe, mana m ga-agwa gị otu ihe, anyị ga-ekwu maka mgbanwe taa ma mgbanwe bụ otu n’ime ajụjụ ndị kachasị ajụ m jụrụ. Nke ahụ bụ, 'Jeff, ugboro ole ka m kwesịrị ịgbanwe mgbatị m?' Nke mbụ, anyị kwesịrị ịghọta, 'Gịnị ka nke a pụtara?' Maka na enwere ọtụtụ ihe nwere ike ịgbanwe.
Nwere ike ịgbanwe ihe omume gị. Nwere ike ịgbanwe ọzụzụ gị. Nwere ike ịgbanwe etu ị si eme mmega ahụ.
Enwere ọtụtụ ihe ị nwere ike ịgbanwe - oge ị na-emega ahụ. Ọtụtụ akụkụ na mgbanwe dị iche iche iji gbanwee, mana ihe kachasị mkpa bụ na mgbe ụfọdụ ị ga-emebiga ihe ókè na mgbe ụfọdụ ịghara ime nke ọma. Ya mere, ka m kọwaa Mgbe ị bụ onye mbido, otu nnukwu nsogbu na ndị mbido bụ echiche a na-achọ ịnwale ihe ọhụrụ niile.
Enwere ihe niile na-egbu maramara, anyị na-anwa ijide ha niile, ma ọ dị nwute na ọ ga-emetụta ọganihu ọzụzụ gị dịka onye mbido kwesịrị ilekwasị anya na mmemme ole na ole ahọpụtara ma nwee nchegbu maka ịme ihe omume ndị a ka mma. Mgbe anyị malitere Jessie na mgbanwe ya, anyị emeghị ọmarịcha ihe omume niile. Anyị gbalịrị ime ihe ndị bụ isi ma rapara na ya ma nyere ya aka ịmụta mmemme ndị a.
N'ime nke a, anyị nwere ụfọdụ ihe nke ịgbanwe ibu o buliri n'oge mmemme ndị a. O doro anya na ịbawanye ike ya. Anyị nwere ike igbanwe etu o si eme mmemme ndị a ka ọ na-amata ha nke ọma.
Karịsịa, anyị nwere ike ịrụ ọrụ na ịbawanye ike ọ nwere ike ịnapụta n'oge mmemme ndị a ka ọ bụrụ na usoro ọ bụla ọ bụla, mgbatị ọ bụla ọ bụla, ọ nwere ike ịnapụta esemokwu na ike nke akwara ọ na-achọ ịzụlite. Ma, ka ị na-achọ imekwu omume, ị na-eche otú ị ga-esi na-eme ihe ndị ị na-amachaghị eme. Omume ndị ọzọ ị na-anwale, ọ ga-adịrị gị ka ọ bụ na ị bụghị ezigbo ya.
Yabụ na ọ ka mma ilekwasị anya n'ihe ndị a ebe a, yana imirikiti mmega ahụ, ugbu a ị tokarịrị ogo, ị gbanweela usoro mmegharị gị, mụbaa olu gị ma belata olu gị, ị gbanwere omume ahụ, site n'ịbawanye ibu gị nwere ike ibuli ya, ma ị nweela ọganihu ma buru ibu karịa ebe ị nwere ike. Otú ọ dị, nke ahụ bụ isi. N'oge a, ọ ga-abụrịrị na ị rụchara ọtụtụ n'ime mmega ahụ.
Ma ọ dịkarịa ala mgbanwe ndị dị egwu ị nwere ike ime na ike gị, mmega ahụ dị iche iche bụ otu n’ime nnukwu ihe ị nwere ike ime iji hụ nsonaazụ na-adịgide adịgide. Mgbanwe mmega ahụ dị ukwuu. Yabụ ọ bụrụ n’iche banyere ya, ọ dịtụla mgbe ị gara - ị na-aga mgbatị ahụ ma ha enweghị ọtụtụ ebe? na ị nwere ike ịrụ ọrụ, ma ị na-eji ihe niile ị nwere maka ebe ahụ? Do na-eme bench presses, ị na-eme pec oche ma ọ bụ ihe.
Do na-eme ihe niile dị ebe ahụ naanị n'ihi na ọ bụ naanị ihe ahụ ka ha nwere, ị ka chọrọ inweta mgbatị ahụ dị mma. Ha enweghịdị mpempe akwụkwọ dị arọ nke mere na ị ga-enweta mgbatị ahụ ịchọrọ ịchọrọ. Ọ bụrụ n ’ị mee nke a, ị nweghi ike ịgagharị na ime ụlọ nkwari akụ ụbọchị abụọ ka nke a gasịrị n’ihi na ị chefuru ihe ị na-emebeghi n’oge ọzọ, ị lere m anya na-eme mmega ahụ n’ebe a na ọwa a - kwuo na anyị mere ihu na nso nso a.
Think na-eche 'oh wow! Emebeghị m ihu na-adọta ogologo oge 'ma ị na-eme ihu, ọ bụ ezie na ị dị mma na-ebu ọtụtụ ibu mgbe niile, ọnyà gị mgbe niile, ọnya gị na-eme ka ihu na ihu na-adọta n'ihi na ị na-etinye aka na mmegharị aghọwo nke ọma. Nke ahụ bụ anyị na-anwa ịbịa ebe a, ka ị na-akawanye n’ihu, gbalịa ịchọta ụzọ iji mee ka onwe gị ghara ịrụ ọrụ nke ọma, ahụ gị bụ nna ukwu nke ịkwụ ụgwọ, ọ bụrụ na ị merụrụ onwe gị, ọ bụrụ na ị merụrụ ikpere gị, gịnị kpatara ịmalite azụ gị azụ? N'ihi na n'ụzọ ụfọdụ ịnyịnya ibu gị na-aga mgbatị ahụ ma chọpụta otu ị ga-esi na-agbagharị na ikpere ahụ na ihe mgbu na-agafe ebe ọ bụla. You wee chọta ụzọ 'Lee! Ana m ada n'ala, ụmụ okorobịa! Ikpere m anaghịzi afụ ụfụ. Ka ọ dị ugbu a, azụ m na-etinye m gburugburu ị ga-anabata ihe ọ bụla ị na-eme.
Have ga-ahụ ụzọ iji hụ na ị na-amanye ha ka ha jiri ihe ha na-amachaghị. Nke ahụ na-esite n'echiche na-esote ebe a banyere exerphobia. Yabụ mgbe anyị na-ekwu maka mgbanwe, nke a bụ otu n'ime mmemme m kacha mma.
Omume ole ka ị masịrị Ma eleghị anya, m gaara ekwu kedu mmega ahụ kachasị amasị gị, mana ole? ọ masịrị gị? N'okwu ahụ, ọ bụrụ na ị nwere ike ịmalite ịgwa m, 'Oh, enwere m obi ụtọ ịme nke a, nke a, nke a, nke a, nke a, na nke a,' mgbe ahụ ọ ga-abụ oge ị kwụsịrị, ma ọ bụ opekata mpe otu n'ime omume ndị a oge ụfọdụ . Mgbe ị malitere ịme egwuregwu, ọ bụ n'ihi na ị rụchara ọrụ nke ọma na ya, yana ihe ọ bụla nke na-arụ ọrụ nke ọma bụ ihe anyị na-eme. Ọ bụrụ na ị nwere phobia squat mana dị ka ndị nwụrụ anwụ, ọ nwere ike bụrụ oge ịmalite ịme squats n'ihi enwere ihe kpatara ị jiri dị ka nke a anaghị m ekwu maka ya, 'can nwere ike ịme squat ma ọ bụ nwụọ, mana ị nweghị ike ịme squat n'ihi na ihe na-egbu gị, ma ọ bụ na-afụ ụfụ, ma ọ bụ azụ gị Ọ na-enye gị nsogbu ma ọ bụ gị ikpere na-enye gị nsogbu. 'O nwere ike ịbụ na ọ nwere ihe na-eme nke a na ha abụghị otu ihe.
Ọ bụrụ na ị họrọ dabere na eziokwu na otu n'ime mmega ahụ siri ike maka gị naanị na usoro nke mgbatị gị, mana otu n'ime ha, ị bụ ezigbo ezigbo ya; nke ahụ bụ mgbe ịchọrọ ịmalite iji ha. Ya mere kwusi egwu banyere omume ndị a ma kama ịchọpụta ndị na-adịghị amasị gị maka oge ahụ wee laghachikwuru ha, ị ga-enwetakwa otu mmeghachi omume ahụ mgbe ịlaghachikwutere ha - mgbanwe ahụ - nke dị mma n'ezie ịmalite ọkụ na mmegharị ọhụrụ. . N'ikpeazụ, ikwu okwu banyere ozu ọnwụ ga-agba mbọ na-arụ ọrụ nke ọma n'ihe anyị na-eme.
kedụ ihe akpụrụ mmiri na-eme
Mgbe ị chere na nke a bụ oge izizi ị nwere ike ịgba ọkpọ, ịgba egwu, ị na-eji ike dị ukwuu ibili na igbe ndị ahụ. Maghị ezigbo oge ị ga-awụlikwa elu, jiri aka gị jiri aka gị oge iji nwee ebe dị elu. Yabụ na ezighi ezi ahụ niile pụtara na ị ga - ewepụkwu calorie karịa n'ihi na ị ga - etinyekwu ike iji rụọ ọrụ ọ bụla, mana mgbe ị ghọrọ igbe mmiri - n'ihi na ọ bụ ihe niile ị na - eme ugboro ugboro - ọfụma, n'ihi na nke arụmọrụ a, ị na-ere obere calorie ole na ole n'otu ọrụ Yabụ kedu ihe ị ga - eme mgbe ị na - achọ ịkwalite ọnwụ? Gbalịa ịchọta ihe omume ị na-emebeghị n’oge; ị kwesịrị ị na-agbalị ịdị iche iche ihe ị na-eme n'ihi na abụba ọnwụ.
Karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-eme ha na a siri ike dị ka ọ na-adịghị nnọọ mgbagwoju anya na-eje ije ma ọ bụ na-eje ije na igwe ịgba ọsọ ebe a maka minit 45 ma ọ bụ otu awa. Ana m ekwu ihe banyere mgbatị gị gbawara, mgbatị ahụ gị HIIT ebe ị gbalịrị ịmị calorie kachasị na obere oge. Ikwesiri igbali mgbe niile igbanwe mmega omume gi.
Ya mere, maka ebe a, abụba ọnwụ; Na-eme ka ihe omume gị dịgasị iche iche. Ya mere ndi mmadu, dika i huru ebe a, ozo enwere otutu uzo ma ya nile dabere na ihe ichoro. Ọ dabere na ebe ịnọ n'ọzụzụ - ị bụ onye mbido ma ọ bụ ọ bụrụ na ị tozuru ogo karịa, enwere ihe ịchọrọ ime.
Enwere mgbanwe mgbe niile ịchọrọ ịgbanwe. Mana nke bụ eziokwu bụ, cheta, ahụ gị dị oke nkọ. Ha maara otu esi eme mgbanwe, ma ha na-anwa ime ka ị nọrọ otu.
Ikwesiri ibu onye mara ihe ma gha ike imeghari na ohere obula nihi na imaara udidi ngbanwe di nma na oge kwesiri. Ndị mmadụ, ọ bụrụ na ị na-achọ mmemme iji nyere gị aka ịchọpụta ebe ị nọ na ọzụzụ ọzụzụ a - ma ọ bụ onye mbido ma ọ bụ dị elu, ma ị maara ihe ịchọrọ inweta - enwere m ike inyere gị aka iru ebumnuche ndị ahụ wee bịa get ga-aga ebe ahụ ngwa ngwa. . Ọ bụrụ na ị pịa njikọ dị n'okpuru isiokwu a, ngwá ọrụ nhọrọ mmemme anyị ga-eme nke ahụ, ga - enyere gị aka belata usoro gị, mee ka ị ruo ebe mbara ala ọzụzụ malitere, wee nye gị ohere ịme ọganihu gị ka ị na - aga n'ihu.
Nke ahụ agabigala na ATHLEANX.com okwu gị na isi mkpịsị aka gị gbadata, ọ bụrụ na ị nwere aro ndị ọzọ dị mma karịa nke Jessie na ihe ị ga-eme na ntinye wee zọpụta ha, achọghị m ịnụ ha! Anaghị m agbanwe intro m All right guys, a ga m ahukwa gi ebe a n'oge na adighi anya.
Ọ dị mma ịme otu mmega ahụ kwa ụbọchị?
Ime otu mgbatị ahụ kwa ụbọchịbụ otu ihe. Ma na-arụ ọrụkwa ụbọchị, n'ozuzu, bụ ihe ọzọ. Azịza nye ajụjụ a na-adabere n'ụdị na ike nkemmega ahụna ị bụna-eme. Dị ka a na-achị, karịsịa maka ọzụzụ iguzogide, izu ike na ụbọchị mgbake dị oke mkpa dị karụpụtan'onwe ya.Ọgọst 7, 2020
Izu ole ka mmega ahụ kwesịrị ịdịru?
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ nsonaazụ gosipụtara na ogo ma gaa n'ihu na-enwe ọganihu oge, ịkwesịrị itinye aka na yaarụ ọrụọ dịkarịa ala ụbọchị anọ ma ọ bụ ise kwa ụbọchịizu. Ma cheta, ị ga-ewuli elu na nke a. Iji malite, ị nwere ike chọọ ịme ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ kwaizuma jiri nwayọ rụọ ọrụ gị ruo ụbọchị ise.
Ninggba ọsọ bụ ụdị egwuregwu dị iche iche nke ị nwere ike ịme ebe ọ bụla, oge ọ bụla, mana ole ka ị kwesịrị ime taa? Anọ m ebe a na Girona n'ihi ya echere m na ọ ga-akara m mma inweta enyemaka nke onye ngosi GCNspaniels bụ Maya Maya, daalụ maka na ị bịakwutela anyị ugbu a, ekwela ka e were eziokwu a na-akpọ Maya onye na-agba ịnyịnya n'ihi ọ n'ezie nwere ọtụtụ afọ nke ịgba ọsọ dị ka ọkachamara triathlete. Daalụ Heather ee ejirila m oge dị ukwuu ịnyagharị, na-egwu mmiri ma na-agba ọsọ ma amaara m na ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ na-agba ọsọ ma ọ bụ na ị chọrọ ịbawanye kilomita ma ọ bụ mee ka m nwee nsogbu, ọ na-esiri m ike izu oke kwuo iji chọpụta otu esi eme nke ahụ, ee, yabụ taa anyị ga-enye gị nduzi ugboro ole n'izu ka ị kwesịrị ịgba ọsọ. Ọ dịghị mfe dịka ịgba ọsọ karịa, ịgba ọsọ ọsọ, ọ bụrụ na ị kpacharaghị anya na ị ga-emerụ onwe gị ahụ, ị ​​nwere ike ịchọpụta na arụmọrụ gị na-eru plateaus ma ọ bụrụ na ịnweghị bọọdụ gị ma tufuo gị akpụkpọ ụkwụ na-agba ọsọ yeah na-agba ọsọ dị mma maka ahụ ike gị nke bụ maka ahụike uche gị, echere m na ị ga-agbanyụ ma ọ dị mfe ịnụ ụtọ, mana ị ga-akpachara anya ma ghara itinye onwe gị nsogbu.
Anyị ga-enye gị ụfọdụ ntụzi aka, mana ị ga-etinyerịrị ya n'ime ndụ gị .Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ na-agba ọsọ ma na-amalite amalite mgbe ahụ ọ dị ezigbo mkpa iwulite ihe n'otu n'otu ka ahụ gị nwee oge iji mee ihe imeghari na ihe nkpali ohuru a. Yabụ ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ ọhụụ ma na-agba ọsọ naanị abụọ n'izu, ị nwere ike ịbawanye nke a ugboro atọ n'izu - nwee opekata mpe otu ụbọchị mgbe ọ bụla gbara ọsọ ka ahụ gị nwee oge izu ike ma dozie, yana mgbe ị malitere bulie nke a, gbaa mbọ hụ na ị na-ege ahụ gị ntị oge niile, ee ma ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ nwa oge ma jiri ya mee ihe, ị ga-eji ya mee ihe iji meziwanye ahụike gị ma ọ bụ rụọ ọrụ naanị iji nweta ya ụzọ atọ. elu Manọgide na-enwe okpukpu anọ n'izu bụ naanị ihe mgbaru ọsọ ma ọ bụrụ na ị na-eme ugbu a ugboro atọ n'izu, mana chee na ị nwere oge na ume iji mee ọsọ ọzọ, na-atụle ibelata otu n'ime ọsọ ndị ahụ ugbu a ma ị nwere ume ịgbakwunye 1 / 4 ee ma gbalịa ime ọsọ gị ma ọ dịkarịa ala minit 20 mana site na ịgbakwunye agbakwunye na otu izu, ọbụlagodi na ọ dị mkpụmkpụ, ọ ga-erite uru na ahụike gị mgbe ị na-agba asọmpi Mgbe ahụ ebe mmalite dị mma bụ n'ezie ụbọchị apụ ka ahụ gị nwee ụbọchị zuru ezu iji weghachite, ugbu a kwenyere na ọtụtụ n'ime anyị na-arụ ọrụ ụbọchị asaa n'izu gburugburu, t okpu bụ nọmba na-adịghị mma na ee ị nwere ike ịga n'ihu na ụbọchị ọzọ a na-agba ọsọ, mana n'eziokwu anyị nwere oge karịa na ngwụsị izu ka ọ bụrụ ihe ezi uche dị na ịnwe ogologo oge gị n'otu oge kwa izu.
Eeh, ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmalite ịgba ọsọ ị ga-achọ inwekwu usoro na atụmatụ gị, mana nke a apụtaghị na ị na-agba ọsọ karịa - ị nwere ike melite arụmọrụ gị site na ị na-agba ọsọ ugboro anọ n’izu, mana ị ga-eme nke ọma ịgafe ọzụzụ ma mee Ọ bụ Ibu ibu ọzụzụ na nke ahụ, nke a bụ ihe nduzi maka usoro adịghị ike Sunday Tinye Oge Gị toro Ogologo Oge Were Takebọchị Izu Ike na Mọnde Tuesday Mee Ọsọ na Condfọdụ Ntuziaka Jiri Wednesday ay dị ka thebọchị Mgbake, Tọzdee Gbaa na Ọnọdụ Fraịde maka Iweghachite na mgbe ahụ Satọde na-agba ọsọ nhọrọ nhazi nhọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịbawanye ọsọ gị ugboro ise n'izu wee tụlee ịnwe oge mgbake Wednesde na ịgbanye ya ma mee ka ọ dị mfe ọsọ, mana gbaa mbọ hụ na ị na-agbasiwanye ike na obere na mgbe Ọ bụrụ na ị nọ na nsọtụ ọzọ nke ụdịdị dị iche iche ma chọta ọtụtụ, ị nwere ike belata ya na atọ site na Ọ bụrụ na ị gbanwere ọsọ Satọde maka ọzụzụ ọzụzụ obe, n'agbanyeghị ike, ọsọ, ma ọ bụ anya, nke a bụ usoro siri ike iji wuo si n'ihi na site allo nku gị ka ha mee nke ọma na oge ya iji zuo ike ma gbasie ike n'etiti ezumike na izu ike chọrọ ka a kwanyere ùgwù, mana achọrọ m igosi na enwere nnukwu ọdịiche dị n'etiti ha abụọ, ugbu a etinyela m Mọnde dị ka ụbọchị ezumike na ọ ghaghị inwe ya, ya mere ọ pụtaghị na ọ nweghị ịgba ọsọ ma ọ nweghị mmega ahụ ma ọ bụ mmega ahụ ọ bụla ma ee, amaara m na ọ ga-abụrịrị na ị ga-agba ọsọ na-arụ ọrụ ma anaghị m ekwu na ịchọrọ ị dinara ụra ụbọchị niile ma ọ bụ ohere maka uche gị na ahụ gị naanị ụbọchị niile n'efu ma nke a dị ezigbo mkpa iji hụ na ị ga-adị mma ma belata ihe ize ndụ nke ọrịa na nnyefe ntinye na n'ikpeazụ ọ bụ ezi echiche ị ga-aga ma nwee obi ụtọ na Mọnde a n'ihi na ị ' Aga m arụsi ọrụ ike maka izu ndị ọzọ nke izu iji weghachite, ọ bụ ihe yiri ya, ọ na-enye ahụ gị ezumike ka ọ ghara ịgba ọsọ ka o nwee ike iji ya mee ihe nwere ike ịhazigharị ọzụzụ ọzụzụ ụbọchị ndị gara aga, mana ọ dị iche n'ihi na anyị na-eme mmegharị na anyị na-akpali mgbasa ọzọ maka ahụ anyị iji gwọọ naanị ziri ezi, na ụbọchị ndị a ị nwere ike ọgbaghara ihe niile, mana ị ga-anọrịrị na-agba ọsọ n'ihi na ọ bụghị mgbatị ahụ yabụ ebumnuche iji meziwanye ahụike obi gị, ọ bụ naanị ebe ahụ iji nyere ahụ gị aka ịkwadebe maka olu gị ihe atụ ị nwere ike ịga maka ịgagharị na obodo na-aga igwe kwụ otu ebe na-ele gị dịka klaasị ma ọ bụ ọbụna igwu mmiri na ọdọ mmiri dị na mpaghara ọ dịghị mkpa ugboro ole ị na-eme atụmatụ maka ịgba ọsọ gị kwa izu mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite nke a jide n'aka ị na-eme ya site na nkwụsị na-eme ya O nwere ike ịbụ na ị ghọtara ugbu a na enweghị iwu ojii na oji dị ka ugboro ole ị kwesịrị ịgba ọsọ kwa izu. Naanị gị nwere ike iburu n'uche ihe niile dị na ndụ gị yana ihe mgbaru ọsọ gị na-agba ọsọ m soro ya kemgbe oge gị, daalụ Heather maka ịnwe m ma enwere m olileanya na ị nwere mmasị n'isiokwu a dịka m mere pịa ebe a ọ bụrụ na ị mere Ọ bụrụ na ị nwere ihe mgbu mgbe ị na-agba ọsọ ma chọọ ịma mgbe ị ga-akwụsị na mgbe ị gafere, ị nwere ike ịchọta otu isiokwu banyere ya ebe a
Kedu ka m ga-esi gbanwee usoro mgbatị m?
Ọ dị mma ịme push kwa ụbọchị?
Na-eme pushups kwa ụbọchịnwere ike ịdị irè ma ọ bụrụ na ị na-achọ usoro mgbatị ahụ ga-agbaso. O yikarịrị ka ị ga-achọpụta uru dị na ahụ ike dị elu ma ọ bụrụ na ịmee pushupsmgbe niile. Maka nsonaazụ kacha mma, gaa n'ihu na-agbakwunye iche iche na ụdị nkeibili elugịmee.Jun 22, 2018
Ọ dị njọ ịrụ ọrụ n'abalị?
A. Omenala, ndị ọkachamara akwadola ịghara ịdị na-emega ahụ nan'abalịdị ka akụkụ nke ezigbo ịdị ọcha ụra. Ugbu a ọmụmụ ihe ọhụrụ, bipụtara Ọkt. 29, 2018, na Egwuregwu Ọgwụ, na-atụ aro na ị nwere ike ịme mgbede na mgbede ma ọ bụrụhaala na ị zere ọrụ siri ike ma ọ dịkarịa ala otu awa tupuoge ụra.Eprel 1, 2019
Nwere ike ịkpụzi n’otu ọnwa?
Bọchị iri atọ ga-efefe, mana ọ bụrụgịlekwasị anya,ị nwere ikenweta nnukwu nsonaazụ. “Ọ bụ ezie na ọ gaghị ekwe anyị omume ibubiga ibu ókè na ibubiga ókè ókèudina-ele anya dị ka a Health Health cover nlereanya site Ememe Ncheta Day, 'kwuru Fauci,'otu ọnwabụ n'ezie oge kwesịrị ekwesị iji hụ nsonaazụ doro anya na ahụike. '5 Eprel 2019
Enwere m ike ịkpụzi n’ọnwa atọ?
Ma ọ bụrụ na ị na-emega ahụ mgbe nile, ka oge na-aga ị ga-enweta ọbụna uru ndị ọzọ bara uru. “N’izu isii ruo izu asatọ, ịnwere ikemaa hụ mgbanwe ụfọdụ, 'ka Logie kwuru,' na n'ime3ruo 4Ọnwagịnwere ike imeihe mara mma dị mma banyere ahụike gị na ahụike gị. ” Nsonaazụ akọwapụtara ikenaraihe banyere otu oge.Abụọ 11, 2020
3bọchị 3 zuru ike nke ukwuu?
Otu nnyocha chọpụtara na ọ were 72 awazuo ike- ma ọ bụDaysbọchị 3- n'etiti ike ọzụzụ maka mgbake zuru oke, mgbe nyocha sitere na ACE Scientific Advisory Panel na-ekwu na oge mgbake nwere ike ịbụ ebe abụọụbọchịruo otu izu dabere na ụdị mmega ahụ.Ọnwa Ise 22, 2019
Ọ dị mma ịme mgbatị ahụ ụbọchị 4 n'izu?
Ọzụzụ anọma ọ bụ iseugboro n'izudị mma, ma ihe ka ọtụtụ ná ndị mmadụ achọpụta na ọ gaghị ekwe omume n'ihi oge na-agwụ, ya mere Mans kwuru na ọ kachasị mma ịchọrọ nke atọ: “Nke a na-ekpughe ahụ gị buru oke ibuọzụzụihe mkpali nileizu, nke na-eme ka ahụ nwee ike imeghari, na-adịwanye ike, na-adịwanye njọ ma na-adaba adaba. ”Ọnwa Iri 26, 2020
Ugboro ole ka ị kwesịrị ịgbanwe usoro mgbatị ahụ gị?
Abụchaghị. Kwesịrị ịgbanwe usoro mgbatị ahụ gị. Just dị nnọọ mkpa ịgbanwe omume na mgbe… na ị maa adịghị mkpa ka ịgbanwee ha gburugburu na bụla mgbatị. Kedu mgbe ị kwesịrị ịgbanwe usoro mgbatị ahụ gị?
Kedu ihe ga - eme ma ị gbanwee usoro mgbatị gị?
N'otu aka, ọ pụtara na ị na-aga n'ihu ma na-akawanye mma. N'aka nke ọzọ, ahụ gị nwere ike ịmalite ịmakarị ọzụzụ, na-egbochi gị imeziwanye ahụike gị. Changinggbanwe usoro mgbatị gị oge niile bụ isi ihe na-agbagha onwe gị na ịchekwa ahụ gị.
You kwesiri ime otu mgbatị ahụ kwa ụbọchị?
Ke ofụri ofụri, ị na-achọghị ime otu mgbatị ahụ Nkea, eme ma ọ bụ eme n'otu ike kwa ụbọchị. 'Ahụ anyị bụ ihe amamihe dị na ya ma ha mụta imeghari na nchekasị ọsịsọ,' ka Alissa Tucker, onye nkuzi ọzụzụ na AKT Studios kwuru.